Imigaqo neMigaqo Yobumfihlo | PIVX
Ilayisenisi yokugqibela kunye nemigqaliselo yokusetyenziswa kwe logo yePIVX kunye negama-magama zixutyushwa ngeli xesha. Nceda uqhagamshelane nathi kwi-Slack ukuba unemibuzo.
I-PIVX ijoliswe kuphela kwiinjongo zomthetho. Akufanele isetyenziswe nayiphi na enye indlela. Akukho mntu kwiphakathi ye-PIVX, okanye nayiphi na isiseko, abaphuhlisi okanye abaxhasi, inkxaso ngenkxaso ye-PIVX kuyo nayiphi na imisebenzi engekho mthethweni. Ukusetyenziswa kwe-PIVX akukho mthethweni kwiindawo ezininzi. Nangona kunjalo, ezinye iimbambano zingabangela ukulinganiselwa ekusebenziseni iimali ze-crypto kunye / okanye izixhobo zokukhusela ngasese, ngoko ke abasebenzisi kulawo makhulu kufuneka baqwalasele oku phambi kokusebenzisa i-PIVX. Ukuba ungathandabuzeki, nceda uqhagamshelane nommeli wengingqi ukuba ugweme ukwenza nantoni na enokuthi ithathelwe ingekho mthethweni kummandla wakho. Umxholo wale webhusayithi, okanye nayiphi na intetho yonxibelelwano evela kumntu wonke kwi-PIVX yoluntu, abasunguli bayo, abaphuhlisi okanye abaxhasi, abayilungisi lomthetho okanye utyalo-mali. Ufanele usebenze ngokukhawuleza kwaye usebenzise isigwebo sakho esisekelwe kuphando kwimithombo yolwazi emininzi ngaphambi kokusebenzisa i-PIVX.
Naliphi na idatha eqokelelwe kubasebenzisi beli sayithi, isetyenziswe ngokubanzi, okanye ukuxhasa imizamo yokuthengisa ngendlela efanelekileyo kakhulu. Umzekelo, ukuchonga ukuba yeyiphi iphepha elibhekiselwe kuyo njl njl njl. Okanye ngabaphi abasebenzisi abanomdla kwi-PIVX xa bathengisa. Asisebenzisi idatha ukulandelela idatha yabantu abathile. Ngaphandle kwelo xesha xa siphucula ukuzama ukuphulaphula amanyathelo okukhusela.
Nangona ngokuqinisekileyo senza yonke imizamo yokugcina le ndawo ichanekileyo kwaye ihlaziywe, kwaye ulwazi lwakho oluzimeleyo ngasese, asikwazi nje ukugcinwa uxanduva lokutshintshwa, iimpazamo, izinto eziphathekayo, okanye izinto ezingekho phantsi kwethu. Ngokomzekelo, uhlobo olukhuselekileyo lokunxibelelana nge-imeyile, okanye i-intanethi ngokubanzi. Nceda sebenzisa imithombo emininzi phambi kokuba wenze izigqibo ezinolwazi, kwaye ucele kunye neyezinye idilesi ze-ProtonMail.com, okanye i-PGP yeminwe kunye ne-ID, ukuthetha ngokukhuselekileyo.